यस्ता लक्षण देखिन्छन् भने बुज्नुहोस क्यान्सर हुदैछ , जन्नुहोस ! ति लक्षण को बारेमा - Samachar PatiSamachar Pati
यस्ता लक्षण देखिन्छन् भने बुज्नुहोस क्यान्सर हुदैछ , जन्नुहोस ! ति लक्षण को बारेमा
क्यान्सर डरलाग्दो रोग हो । क्यान्सर रोग लागेमा व्यक्तिको ज्यानै समेत जानसक्छ । यसको लक्षण समयमै पहिचान भएको खण्डमा भने आवश्यक उपचारद्वारा यसलाई निको पार्न पनि सकिन्छ । सुरुवाती अवस्थामै यसको लक्षण थाहा पाएको खण्डमा यसको उपचारमा खासै समस्या उत्पन्न हुँदैन । बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ । जीवनशैलीमा सुधार ल्याएर यो रोग लग्नबाट बच्न सकिन्छ ।
एक तथ्यांक अनुसार विश्वमा दुई सयभन्दा बढी प्रकारका क्यान्सर छन् । यस्ता क्यान्सर शरीरका विभिन्न अंगहरूमा लाग्न सक्छ । जस्तै, मुखको क्यान्सर, स्तनको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, पेटको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर इत्यादि । यस्ता क्यान्सरका खासै कुनै लक्षण देखिँदैन । ससाना कुरामा ध्यान दिएर पनि यसको लक्षण पत्ता लगाउन सकिन्छ । जुन यस प्रकार छ:
छालामा दाग देखिनु
छालामा दाग देखिनु तथा त्यसको रङ्ग तथा आकारमा क्रमशः परिवर्तन आउनु क्यान्सर रोगको प्रारम्भिक लक्षण हुनसक्छ । शरीरमा अलग अलग किसिमको दाग वा निशान देखिरहेको छ भने तुरुन्तै चिकित्सकका जानुपर्छ चिकित्सकले आवश्यक जाँच तथा बायोप्सीद्वारा क्यान्सर रोग भए नभएको पत्ता लगाउने गर्छन् ।
विभिन्न कारणले शरीरमा थकान महसुस हुने गर्छ । त्यसबाहेक ल्यूकेमिया, कालोन लगायत पेटका क्यान्सरको पहिलो लक्षण भनेकै थकान महसुस हुनु हो । विना शारीरिक श्रम तथा आराम गरेपश्चात पनि थकान महसुस हुन्छ भने तुरुन्तै चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ । यो क्यान्सर रोगको प्रारम्भिक लक्षण पनि हुनसक्छ ।
लगातार खोकी लाग्नु
खोकी लाग्दा कफ आउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले धूमपान नगर्नेहरुमा कफ आउनु खासै गम्भीर मानिँदैन तर धूमपान गर्ने व्यक्तिमा कफका साथमा रगत देखिनु चाहिँ क्यान्सर रोगको संकेत हुनसक्छ ।
आवश्यकता भन्दा बढीको खाना, अपच लगायतका कारण पेट भुल्नु स्वाभाविक हो । तर यसका साथै अचानक तौल कम हुनु, थकाइ लाग्नु वा ढाड दुख्नुचाहिँ गम्भीर समस्या हो । महिलाहरूको पाठेघरबाट लगातार रक्तस्राव हुनु ओभरियन क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ ।
घाँटी फुल्नु, सुन्निनु
घाँटी, कुम तथा शरीरमा विभिन्न भागमा सिमी आकारका ग्रन्थि हुन्छन् । यस्ता ग्रन्थि फुल्नु वा सुन्निनु संक्रमण हुनुको संकेत हो । विशेषगरी लिम्फोमा, ल्यूकेमिया लगायतका क्यान्सरका कारण समेत यस्ता ग्रन्थि सुन्निने गर्छ । यस्ता रोगको उपचारका लागि चिकित्सकको परामर्श आवश्यक छ ।
दिसापिसाबमा रगत देखिनु
दिसापिसाबमा रगत देखिए चुप लागेर बस्नु हुँदैन, तुरुन्तै चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । दिसामा रगत देखिनु कोलोन क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ । पिसाबमा रगत देखिनु मुत्रनलीको क्यान्सर हुनसक्छ ।
पिसाबमा समस्या देखिनु
बद्दो उमेरसँगै पिसाबमा विभिन्न समस्या देखिने गर्छ । पटक पटक पिसाब लाग्नु, पिसाब चुहिनु पिसाब सम्बन्धी समस्या हुन् । प्रोस्टेटको समस्या भएमा पनि यो समस्या देखिनसक्छ । प्रोस्टेट क्यान्सरका कारण पनि यस्तो समस्या देखिने गर्छ ।
खाना निल्नमा समस्या
खाना निल्नमा समस्या हुनु, खाना घाँटीमा अड्कनु पनि क्यान्सर रोगको संकेत हुनसक्छ । घाँटीको क्यान्सर तथा अन्ननलीको क्यान्सर भए खाना निल्नमा समस्या हुने गर्छ ।
खानेकुरा चपाएर खानु स्वास्थ्य को लागी राम्रो
बिहान नुहाउनुहुन्छ कि बेलुकी ? जन्नुहोस ! कुन बेला नुहाउदा हुन्छ फाइदा
सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु फेला
मानव बेचबिखन गर्नेलाई २० वर्ष कैद फैसला
निर्मला पन्तको लागि केहि गर्न नसक्ने सावित्रीले रवि लामिछानेको बारेमा बोल्न सुहाउछ ? के.पि खनाल
होटल टास्क सञ्चालनमा उपराष्ट्रपति पुनद्धारा उद्घाटन
पर्वतमा बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, ३८ घाइते
बेनी बाट पोखरा आउदै गरेको बस दुर्घटना “२ जनाको मृत्यु “